ဝိုင်ချိူ တစ်ခွက်လိုရစ်မူး – Grab Love Story
သက် ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်အလှကို သူမြင်လိုက်တော့ အရမ်းမှင်သက်မိသွားသည် အရင်ကတည်းက သူ့အလှကို မြင်ဖူးနေပေမယ့် သူဒီလောက် မှင်သက်ခြင်းမဖြစ်မိခဲ့ အရင်ကတော့ သူဝတ်ထားသည့် ဖင်ကျပ်ဘောင်းဘီလေးအောက်မှ တင်းရင်းထားဝိုင်းသည့် ဖင်အလှကို မြင်ပြီးလီးတွေ တဒိတ်ဒိတ်တောင်ပြီးခုန်နေခဲ့ပေမယ့် ဒီလောက်ထိ မဖြစ်ခဲ့ ပြီးတော့ သိပ်ကိုလှပ ပြီး တင်းရင်းသည့် နို့သီးတွေ ထင်တာကတော့ ဘော်လီပုံကောင်းမှုကြောင့် သိပ်ကိုလှပနေသည်ထင်ခဲ့မိတာ။ ဒီလောက်ထိ နို့သီးတွေကလည်း ၀ိုင်းစက်ပြီး လှပနေတာကို မတွေးမိခဲ့။ အခုတော့  မျက်မြင်ကိုယ်တွေ့မြင်ရပြီ။ သူ့ရှေ့မှာ သက် တစ်ကိုယ်လုံးက အ၀တ်အစားတွေ မရှိ ၀ိုင်းစက်သည့်တင်ပါး(ဖင်) ၊ စူဖြိုးသည့် နို့များပြီးတော့တုတ်ခိုင်သွယ်ပြောင်းသည့် ပေါင်တံဖွေးဖွေးများနှင့် ပေါင်ကြားကအမွှေးပါးပါးလေးများ အောက်မှာ သူ့ကို မျက်စပစ်နေသည့် စောက်ပတ်ကလေး။ အို…လှလိုက်တာ သက်ရယ်…သူ ရေရွတ်မိတော့ ။ သက် က သူ့ကို ရှက်နေသည့် မျက်ဝန်းတစ်စုံကို လက်ဆောင်အပိုပေးပြန်သည်။
သက် ရဲ့ အနားကို သူကပ်သွားပြီး စောက်ပတ်လေးကို ဘယ်လက်ဖ၀ါးဖြင့် အုပ်ကိုင်လိုက်တော့ သက်က မသိမသာလေး ညည်းတွားသံပြုတော့သည်။ သက်ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်လေးကို သူ ညာဘက်လက်ဖြင့် သိုင်းဖက်လိုက်ပြီး စောက်ပတ်ကို ကိုင်ထားသည့်လက်ကို သက်ရဲ့ ကုပ်ပိုးလေးကို ဆွဲယူပြီး သက်ရဲ့ နှုတ်ခမ်းကို စုပ်နမ်းလိုက်သည်။ “အင်း..အွန်း..အွန်း” အသံလေးများဖြင့် သက် က သူ့အနမ်းများကို ခံနေရရှာတော့သည်။ သက်ရဲ့ နှုတ်ခမ်းလွှာဖူးဖူးလေးများက သူ့ကို ၀ိုင်ချိုတစ်ခွက်လို ယစ်မူးစေသည်။ ရည်းစားဘ၀ ကတည်းက သူ့ကို ပြုစားနိုင်ခဲ့သည့် စတောဘယ်ရီရောင် နှုတ်ခမ်းထူထူများ။ သူအခုတော့ သိမ်းပိုက်ခဲ့ပြီ။ သက်ကို သူချစ်တယ်။ ချစ်ခြင်းဖြင့် ဖွဲ့သော အပြာရောင်ကဗျာတစ်ပုဒ်ကို သူ ဒီည စီမံခန့်ခွဲတော့မယ်လေ။ “သက်ရယ် ချစ်တယ်ကွယ်” ဆိုတော့ သက်က ဘာမှပြန်မပြော သူ့ကို သိုင်းဖက်ထားသည်။ သက် နို့သီးတွေကို အားရပါးရ စို့ပစ်တော့သည်။ “အင်း…ဟင်း..ဟင်း…ရှီး…” ညည်းတွားသံလေးများပြုသည်။ သက် ခံစားရခက်သည်ထင်သည်။ အခုမှနို့အစို့ခံဖူးတာဆိုတော့ နည်းနည်ေးတာ့အနေရခက်မပေါ့ သက်ရယ်။ ပြီးတော့ သက်ရဲ့ နို့သီးခေါင်းလေးတွေကို ချေ ပေးတော့ သက်က ခြေထောက်တွေ ပျော့ခွေသွားသည်။
သူ့ရဲ့ ပခုံးကိုခိုကာ နောက်ကျောကို အတင်းဖက်ထားတယ်။ သက်ရယ်…။ နောက်ကနေ သက်ရဲ့ ဖင်လေးကို ပွတ်သတ်ပေးနေလိုက်သည်။ လှပတဲ့ ဖင်သားလေးများက အရမ်းကိုနူးညံ့လွန်းသည်။ ၀ါဂွမ်းလေးတွေ နဲ့ ထုပ်ထားတဲ့ ဖက်လုံးလေးတမျှပါလား။ အိုး…ကွယ်…မောင်ကြင်နာတော့မယ်။ “သက်ရယ်…မောင်အရမ်း ထန်နေပြီကွာ” “အို…မောင်ကလည်း…သိဘူး…” သူ ပုဆိုးကိုဆွဲချွတ်လိုက်တော့…မာထန်နေတဲ့ လီးက သက် ရဲ့ စောက်ဖုတ်လေးထံ ညွှန်ပြနေသည်။ သက်က သူ့ရဲ့လီးကို မြင်သွားပြီးမျက်နှာလွှဲနေတော့သည်။ “သက်…ဘာလို့ ဟိုဘက်လှည့်နေရတာလဲ ဒီဘက်လှည့်ပါဦးကွာ” “ဟာကွာ..မောင်ကလည်း သက် ကြောက်တယ်…မောင့်ဟာကြီးကို” “ဟဟ..သက်ကလည်း ကြောက်စရာမှမဟုတ်တာကို ဒါဆိုရင် မောင်ကရော သက်ဟာလေးကို ကြောက်ရမှာလား ချစ်ရမှာလားကွ” “ဟင့်ဟင့်…မောင်ကလည်းကွာ ဘာမှန်းမသိဘူး ရှက်တယ်…” “ မရှက်ပါနဲ့ ချစ်ရယ်…မောင့်လီးကို ကိုင်ကြည့်စမ်းပါ…” “အို…ကွာ…” ဆိုပြီး သက်က သူ့ ရင်ခွင်ထဲမှ ရုန်းထွက်ဖို့ကြံသည်။ ဘယ်ရမလဲ သူကလည်း သက်ကို ကိုင်ထားသည့် ဖင်လေးကို အသာညှစ်ပစ်လိုက်ပြီး ခပ်ဆတ်ဆတ်လေး လက်ဝါးလေးနဲ့ ရိုက်လိုက်သည်။ ပြီးတော့ သက်ကို နှုတ်ခမ်းတွေ နမ်းပြန်သည်။ နို့တွေလည်း ပွတ်သတ်ပြီးနယ်လိုက်သည် ပြီးတော့ သက်ပေါင်ကြားထဲက စောက်ပတ်လေးကို သူ့လီး နဲ့ ထောက်ထားလိုက်သည် လီးက စောက်ပတ်လေးပေါ်မှာ အခန့်သား။ သူနည်းနည်းဖိထားလိုက်သည်။
သက်ကတော့ မျက်နှာတွေရဲ စွေး လို့ရယ်။ ပြီးတော့မှ သက်ကို သူပွေ့ချီလိုက်ပြီး မွေ့ရာပေါ် ပက်လက်တင်လိုက်ပြီး။ သက်ပေါင်လေးကို ဆွဲဖြဲလိုက်တော့ သက်က မျက်လုံးအ၀ိုင်းသားလေးနဲ့ သူ့ကို အကြည့်.. “သက်…မောင် လီးအရမ်းတောင်နေပြီ လိုးတော့မယ်နော်” “ဟင့်..သက်ကြောက်တယ်…” “သက်ကလည်း မကြောက်ပါနဲ့ လိုးတာအချိန်ကြာရင် ခံစားမှုကောင်းသွားမှာပါ” “ဟုတ်လို့လား” မယုံမရဲနဲ့မေးတော့ သူရယ်ချင်သွားသည်။ “ဒါပေါ့ ကလေးရဲ့ ကဲပါ စောက်ပတ်လေးထဲ မောင်ထည့်မယ်နော်” “ဟင့်…” ဆိုပြီးအသံပြုသည်။ မျက်နှာကလေးကလည်း မဲ့တဲ့တဲ့ဖြင့် “သက် ကို ကိုယ်သိပ်ချစ်တယ်” ဆိုပြီး ပြောတော့ “မောင့်ကို သက်လည်း သိပ်ချစ်တယ် သက်ကို နာအောင်မလုပ်နဲ့နော်” “မောင်လည်း မလုပ်ချင်ပါဘူးကွာ။ ဒါပေမယ့် နည်းနည်းတော့ နာမယ်လေ အောင့်ခံကွာ…ခံစားရတာသိပ်ကောင်းမှာပါ ကိုယ်တို့အချစ်တွေနဲ့ လိုးကြတာပဲ” “အဲဒီလိုးတယ် ဆိုတာကြီးကို ပြောတာကြောက်တာ” “သြော်..သက်ရယ် နောက်ဆုံးတော့ လိုးတာက လိုးတာပါပဲ လီးနဲ့ စောက်ပတ်နဲ့ လိုးတာပဲ ဘာဖြစ်လဲ ကဲလိုးမယ်” ဆိုပြီး သူခပ်ပြတ်ပြတ်ပြောပြီး လီးကို သက် ရဲ့ စောက်ပတ်လေးကို တေ့လိုက်တော့ သက် ကတွန့်သွားသည်။ သူသဘောကျစွာပင် သက်စောက်ပတ်လေးထဲမှ စူထွက်နေသည့် စောက်စိလေးကို တချက်ပွတ်ပေးလိုက်တော့ သက် တင်ပါးလေးကော့တက်လာတော့သည်။
အဲဒီအချိန်မှာပဲ သူ့လီးက သက်စောက်ပတ်လေးထဲကို ဒစ်ဖျားဝင်သွားပြီ ။ နည်းနည်းဆောင့်သွင်းလိုက်တော့ တစ်ဝက်ဝင်သွားချိန်မှာ သက် စောက်ပတ်ထဲကနေ အမှေးပါးလေး ပေါက်သွားတာနဲ့ သွေးစလေးတွေ နည်းနည်းထွက်သွားတော့သည်။ အိုး…ပါကင်လေးကွယ်..သက်ကိုသူ ပါကင်မှန်းသိသော်လည်း အခုလို ပါကင်ဖွင့်တာကို သူကိုယ်တိုင်လုပ်လိုက်ရတော့ ကျေနပ်သွားမိသည်။ ချစ်တယ် သက်ရေ…နည်းနည်းတော့ကြမ်းပြီ ။ သူတဆုံးဝင်အောင်အားစိုက်လိုက်တော့ သက်က နည်းနည်းနာသွားသည်ထင်သည်။ အား..အား..ဟု လေတိုးသံလေးဖြင့် အော်သည်။ လီးတချောင်းလုံး သက် ရဲ့ စောက်ပတ်လေးထဲ ၀င်သွားပြီဆိုတော့ သူ လီးကို စောက်ပတ်လေးထဲကို ရှေ့တိုးနောက်ဆုတ် နည်းနည်းနှဲ့ပြီး အထုတ်အသွင်းလုပ်နေတော့သည်။ ကောင်းလိုက်တာ သက် ရယ်။ သိပ်ကိုကောင်းတဲ့ စောက်ပတ်လေးပါပဲ။ “အား..အား..မောင်…ရှီး…အား…” သက်ကတော့ သူ့ဆောင့်ချက်ပါးပါးလေးတွေထဲမှာ ပျော်ဝင်နေရှာပြီ။ “သက်ရယ်…သက်ရဲ့ စောက်ပတ်က သိပ်ကောင်းတာပဲ သိပ်လိုးလို့ အရသာရှိတယ် ချစ်တယ်ကွယ်” “အား..မောင် ဖြေးဖြေးနော်..သက်မခံနိုင်သေးဘူး” “အင်းပါသက်ရယ် မောင် ဖြေးဖြေးလိုးပေးမယ်နော် သက် အရသာရှိအောင် လိုးပေးမယ်” ဖြေးဖြေးချင်းဆောင့်နေရင်း သက်နို့သီးလေးတွေကို လက်နှစ်ဖက်လုံးနဲ့ ဆုပ်ကိုင်ပြီး အရသာခံနေမိတယ်။ သက်နှုတ်ခမ်းလေးကတော့ သူတစ်ချက်ဆောင့်လိုက်တိုင်း နှင်းဆီပန်းလေး အာလာသလို ပွင့်အာလာတော့တယ်။ “သက် နည်းနည်း ပြင်းပြင်းလေး လိုးမယ်ကွာ၊ နည်းနည်းအားနဲ့ဆောင့်မယ် မောင် သိပ်ကောင်းနေလို့ပါ” “အဟင့်…ဟင့် မောင့်…ဟင့် ဟင့်” သက်က ပေါင်လေးကားပြီး ခေါင်းက ဘယ်ညာယမ်းနေတော့တယ်။
သူကလည်း သက်ပေါက်နှစ်ချောင်းကို လက်နှစ်ဖက်ဖြင့် သိုင်းမက တဗြုတ်ဗြုတ်မြည်အောင်ကို လိုးတော့တယ်လေ။ သူ အရမ်းမာန်တက်လာပြီ။ သူရဲ့မင်္ဂလာဦးညမှာ သက်ကို စိတ်ချစ်လက်ရှိ ချစ်ချင်စိတ်က အရင်ကတည်းက ထိန်းထားရတာ။ အရင်ကတည်းက သက်ကို ခိုးပြီး စားဖို့သူကြံပေမယ့် သက်က မလုပ်ပါနဲ့ဦးဆိုတာနဲ့ သူ သက် ရဲ့ ဖင် ၊ သက်ရဲ့ စောက်ဖုတ် ၊ သက်ရဲ့ နို့သီးတွေကို မှန်းပြီး ဂွင်းပဲတိုက်နေရတာ အမော။ အခုတော့ မင်္ဂလာဦးည သူ့ည၊ ရွှေစင်တသိန်း တန်တဲ့ည အို..ကွယ်…ချစ်သူရဲ့ စောက်ပတ်က သူ့ကို ရင်တွေ အေးမြ နှစ်သက်စေတယ်။ “အား…အား…အား…ဗတ်..ဗတ်ဗတ်ဗတ်” “ရှီး..အား…အင်း..အင်း..အင်း….” သက်ကလည်း သူ့ဆောင့်ချက်တွေမှာ တအင်းအင်းအော်လို့ရယ်.။သူကလည်း မာန်တက်ပြီး သက်ကို အတင်း ကြုံးလိုးနေတော့တယ်…. “မောင်..အင့်…အား……အူး…” အလူးအလှိမ့်ကို အလိုးခံနေရှာသည့် သက် ကိုကြည့်ရင်း သူ သိပ်ချစ်သွားမိသည်။ သူ့ကိုသိပ်ချစ်၍ တန်ဖိုးထားရသည့် စောက်ပတ်လေး ပြဲအောင် ကားပြီး စောက်ပတ်ကို သူတက်လိုးသမျှ အလိုးခံနေရှာသည်မဟုတ်ပါလား။ သူ့ကိုသိပ်ချစ်သည့် သက်ကို တစ်ကယ်တော့ အလှကြည့်နေချင်သည်။ ဒါပေမယ့်မဖြစ် သူ တပ်မက်မှုကို မထိန်းနိုင် သက်ရဲ့ ဖင် ၊ သက်ရဲ့ စောက်ပတ် ၊ သက်ရဲ့ နို့သီး ၊ သက်ရဲ့ နူးညံ့မှုတို့က သူ့ကိုဆွဲငင်ယူသွားသည်။
“သက်…တမျိုးကြီးပဲ မောင်..အင့်…အား…ဟင့်းးဟင်း အိုး…ဟင့်” “အား..ဘယ်လိုလဲဟင်သက်…ရှီး…” သူလည်း ဖီးလ် တော်တော်တက်နေပြီဖြစ်သည်။ သက်ရဲ့ခံစားမှုကလည်း တော်တော်ကောင်းနေပုံရသည်။ သူခဏ မှေးလိုက်ပြီး သက်ကို မျက်နှာလေးကိုဖေးမပြီး မေးလိုက်တော့ ရီဝေသည့် မျက်ဝန်းနက်များနှင့်သူ့ကို မော့ကြည့်ပြီး။ “မောင်..ဆောင့်လိုးလိုက်တိုင်း သက် သေးပေါက်ချင်သလိုပဲ…” သက် နှုတ်ခမ်းက လိုးတယ် ဆိုတာကိုပင်ပြောထွက်ခဲ့ပြီ။ ချစ်လိုက်တာသက်ရယ်။ မောင်နဲ့အတူတူခံစားမှုရပြီပေါ့။ တစ်ကယ်တော့ သက် ဖီလ်းတွေ တက်နေတာ သူက အခုမှ အလိုးခံတာဆိုတော့ ဒါတွေမသိ။ သေးပေါက်ချင်သလို ကြီးပဲတဲ့လေ။ ကဲ ဘယ်လောက်ချစ်ဖို့ကောင်းသတုန်း။ “အဲဒါ သေးပေါက်ချင်တာမဟုတ်ဘူး သက်ရဲ့ လိုးတဲ့ အခါ အဲဒီလိုဖြစ်တယ်လေ…မောင်လိုးပေးတာ ကို သက်ဖီလင်ဝင်လာတာပေါ့…အဲဒီခံစားမှုလေးကို စိတ်လွတ်ကိုယ်လွတ်ခံစားပစ်စမ်းပါသက်ရယ်… မောင်နဲ့ အတူတူ ခံစားမှု ယူစမ်းပါ ဒီညဟာ မောင်တို့ရဲ့ အချစ်ကို စိတ်လွတ်ကိုယ်လွတ်ခံစားဖို့အတွက် ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ ညပဲလေ…” သူ အရှည်ကြီးပြောလိုက်ပြီး နိမ့်တုံမြင့်တုံဖြစ်နေတဲ့ သက်ရဲ့ ရင်ညွှန့်လေးကို ငုံ့နမ်းလိုက်ပြီး သက်မျက်နှာ ဖွေးဖွေးလေးကို ပင့်ကြည့်လိုက်တော့…တွေဝေနေသည့်မျက်နှာလေးပေါ်မှာ သက်ရဲ့ချွေးစလေးတွေ နဲ့ ဆံနွယ်လေးတွေ ကပ်လို့… “အဲဒါ တကယ် အချစ်ခံစားမှုလားဟင်…” “ဒါပေါ့ သက်ရယ်..သက်မောင့်ကိုချစ်တယ်မဟုတ်လား ကိုယ်တို့ အချင်းချင်း အပွင့်လင်းဆုံးချစ်ကြမယ်လေနော်” သက်မျက်ဝန်းလေးက ၀ိုင်းစက်စွာ သူ့ကို မော့ကြည့်ရင်း “သက်လေ..မောင့်ကို သိပ်ချစ်တာပဲ…” တည်ငြိမ်စွာပြောလိုက်တဲ့ စကားကြောင့် သူ့ရင်ထဲ ဘယ်တုန်းကမှ မခံစားဖူးခဲ့တဲ့ အမျိုးအမည်မသိတဲ့ ခံစားမှု တစ်ခု ဖြတ်စီးသွားတော့သည်။
“ဒါဆိုရင် ဒီည မောင်နဲ့အတူတူ အချစ်တွေ အပြိုင်ကျဲရအောင်နော်…” သက်ရဲ့အဖြေကတော့…. “မောင်ချစ်သလို သက်လည်းချစ်မယ်…” ဆိုပြီး ပက်လက်လှန်အနေအထား ကနေ ထထိုင်ဖို့ကြိုးစားတော့ သူအလိုက်တသိပင် သက်စောက်ပတ်ထဲဝင်နေသည့်လီးကို ဆွဲနှုတ်လိုက်ပြီး သက်ဘေးမှာ ထိုင်လိုက်သည်။ ပြီးတော့ သက်က ဖွာလန်ကျဲနေသည့် သူ့ဆံပင်တွေကို ကုတင်ဘေးက ခေါင်းစီးသားရေပင်ဖြင့် စုစည်းလိုက်တော့ ရင်သားနို့သီးတွေက ကော့တက်ပြီး စူထွကနေတာက လှချင်တိုင်းလှနေသည် ဒူးတုပ်လျှက် သက်ရဲ့ ကော့ကာ ပျော့ပျောင်းနေသည့် ခန္ဓာကိုယ်အလှက သစ်ပင်တစ်ပင်လို။ ပြီးတော့မှ သက်က အလှဆုံး အပြုံးတစ်ခုကို ပြုံးပြီး “အိပ်လေမောင်…” “ဘာလို့လဲသက်ရဲ့” “ပက်လက်လှန်လေ…” သက်စကားကို နာခံလိုက်ပြီး ပက်လက်လှန်လိုက်တော့…သက်က မယုံနိုင်စွာပင် သူ့ရဲ့ လီးတုတ်တုတ်ကြီးကို နူးညံ့သည့် လက်ဖ၀ါးနုလေးဖြင့် ဆုပ်ကိုင်လိုက်ပြီး ဂွင်းထုသလို လုပ်ပေးတော့ သူအံ့သြသွားသည်။ “ဟာ..သက်ရယ်…” သက်ကတော့ အပြုံးပန်းတစ်ခုဖြင့် သူ့ကို ဂွင်းတိုက်ပေးနေတော့.သူ ခံစားမှုတွေ ဝေလာရပြန်ပါပြီလေ။ သက်ရဲ့ အနုပညာဆန်တဲ့ လက်ချောင်းသွယ်များက သူ့လီး ပေါ်မှာ ကြင်နာစွာ ရစ်ပတ်လို့ရယ်။ သက်က မြန်မြန်လေး ရှေ့တိုးနောက်ဆုတ်ဖြင့် သူ့ကို ဂွင်းထုပေးနေတာ သက် ကိုကြည့်ရင်း သူ သိပ်ကို ပျော်ရွှင်မိသလို။ အချစ်စိတ်တွေလည်း မခံမရပ်နိုင်အောင် မွှန်နေမိတော့တယ်။
သူဆတ်ခနဲ ထထိုင်လိုက်ပြီး “သက်ရယ်..မောင်တော့ မယုံနိုင်အောင်ပဲနော်…သက် ကိုယ့်ကို ဂွင်းထုပေးတယ် ဟုတ်လား” “ဟင်…ဒီလိုလုပ်တာ ဂွင်းထုတယ် ခေါ်တာလား” “ဟင်…” သူ အံသြရပြန်ပါပြီလေ။ “သြော်..သက်ရယ်…ကိုယ်တော့လေ…သက်ကို အရူးတစ်ပိုင်းကို ချစ်မိနေမိပြီသိလား” “မောင်ရယ်..သက်လည်းတူတူပါပဲ…မောင့်ကို သိပ်ချစ်တယ်…မောင့်ကို ပေးနိုင်တာမှန်သမျှ ပေးပြီးချစ်ပါတယ်ကွယ်…” သက်ရဲ့ အကြင်နာစကားတွေကြားမှာ သူမနေနိုင်တော့။ ဆာလောင်မွတ်သိပ်စွာဖြင့် သက်နှုတ်ခမ်းတွေ ကို နမ်းမိနေပြီ။ “မောင် အိပ်တော့ ပက်လက်လှန်အိပ်” ဆိုပြီး သူ့ကို အတင်းပက်လက်လှန်ခိုင်းပြီး။ သက်က သူ့အပေါ်ကို ကားယားခွက မှောက်ချလိုက်တော့သည်။ သက်က သူ့ ဗိုက်ပေါ်မှာတက်ခွထိုင်လိုက် ပြီး သူ့ရဲ့ အနည်းငယ်ပျော့နေသည့်လီးကို လေးငါးချက်ခန့် ထုပေးလိုက်တော့ လီးက ပြန်မာပြီး တင်းလာသည်။ ဖရိုဖရဲ စည်းထားသည့် ဆံနွယ်များက သက် ရင်သား နှစ်ဖက်ကို ထိခတ်နေစဉ် သက်က သူ့လီးကို အလျှင်အမြန်ပင် သူ့စောက်ပတ်ထိပ်ကို ထိပြီး ဖိချလိုက်တော့ လီးတစ်ချောင်းလုံး သက်စောက်ပတ်ထဲ နစ်ဝင်သွားတော့သည်။ “ဟာ…” သူ ဘယ်တုန်းကမှ မျှော်လင့်မထားခဲ့မိသည့် အဖြစ်အပျက်… အိပ်မက်များလား သက်ရယ်…ချစ်မယ့်ချစ်တော့လည်း သူပင် မတောင်းဆိုရ အပေါ်မှ နေ၍ သူ့ကို ပေးတော့မည့် သက်။ “မောင်..ပျော်လားဟင်…” သူ့ရင်ထဲဆို့သွားသည်။ ပျော်လွန်း၍ ဆို့သည့် ပုံမျိုးပင်။ “မောင် ပြောမပြတတ်တော့ဘူး သက်ရယ်..သိပ်ကျေးဇူးတင်တာပဲ…မောင် သက်ကို ဘယ်လိုစကားလုံးနဲ့မှ ပြောမပြတတ်ပါဘူး” သူ့စကားဆုံးတော့ သက်က စောက်ပတ်ထဲဝင်နေသည့် လီးကို တချက်ချင်း ဖင်ကားကားလေးကို ကြွရင်း ဆောင့်တော့သည်း ခုနက သူ အသားကုန်ဆောင့်လိုးတာထက် ပိုကောင်းသည်လေ စောက်ဖုတ်နှုတ်ခမ်းဝလေးက သူ့လီးအရင်းထိ အောင် တစွပ်စွပ်နှင့် ရိုက်ခတ်နေသံက သူ့ရင်အဟုန်တို့ကို လှိုက်မောစေတော့သည်။ တဖြည်းဖြည်းနှင့် သက်ရဲ့ ဆောင့်လိုးချက်လေးတွေက ပြင်းထန်ပြီး အချစ်လှိုင်းတွေက ဘောင်ဘင်ခတ်နေတော့သည်။
“မောင်…ကောင်းတယ်…အား…ရှီး…” သက်ရဲ့ ခံစားမှု စကားလုံးလေးများဖြစ်သည်။ သူကလည်း သက်ရဲ့ ဖင်လေးကို သူ့လက်ဖြင့်လှမ်းဖက်ပြီး စအိုလေးကို ကလိပေးနေတော့သည်။ “ဟင်းဟင်း..ဟင်းဟင်း…အင်း…အဲ…အဲင်း…” ရှိုက်ကာ ရှိုက်ကာဖြင့် သူ့ဆောင့်လိုးပေးတာကို သူပြန်ခံစားနေသည့် သက်ရဲ့ မာန်ဝင်ပုံတွေက့  ကချင်တိုင်းကနေသော အကမယ်လေးမမာ လွင့်နေတော့သည်။ “သက်ရယ်..သိပ်ကောင်းတာပဲ…” “သက်လည်းကောင်းတယ်…အား…အ………….အား…ချစ်တယ်…ချ…စ်..တယ်..အယ်မော..င်..ဟီးင်း” သက်ရဲ့ မျက်နှာက ခံစားမှုအပြည့်ဖြင့် မဲ့လို့နေတယ်။ သူ ကလည်း အောက်ကနေ သက်ရဲ့ စောက်ပတ်ကလေးကို ပြန်ပြီးလီးနဲ့ ကော့ထိုးပေးနေတော့ နှစ်ယောက်သား လီး နဲ့ စောက်ပတ် တွေ့တဲ့ အခါ ရိုက်မိတဲ့ လိုးသံတွေကလည်း တဖျောက်ဖျောက်နဲ့ပေါ့။ သူ မာန်တက်လာပြီ ။သူထထိုင်လိုက်ပြီး သက် ရဲ့ ပေါင်နှစ်ချောင်း သူ့ ပေါင်တွေပေါ်တင်လိုက်ပြီး ဖင်ကားကားလေးကိုမက သက် ခန္ဓာကိုယ်လေးကိုကိုင်ပြီး ဆောင့်လိုးပစ်တော့သည်။
“အား… အား….. အား….. အား…. အား…. အား… အား…. အား… အား… အား… အား… အား… အား… အား… အား…အီး…ဟီင်းးးး” အသားကုန် ညညးတွားနေသည့် သက်ရဲ့ အော်သံလေးများက သူ့လိုးချင်စိတ်ကို ပါဝါမြှင့်ပေးနေသလိုလို။ သက်ကို ပက်လက်လှန်လိုက်ပြီး။ ပေါင်ကို ဆွဲဖြဲလိုက်သည်။ ညည်းတွားနေသည့် သက်ရဲ့ ရှိုက်သံများ နှင့်အတူ သူ့လီးကိုတရကြမ်း သက်စောက်ပတ်ထဲသို့ သွင်းလိုက်ပြီး တဗုတ်ဗုတ်မြည်အောင် တချက်ချင်းဆောင့်လိုးချက်တွေဖြင့် သက်ကို လေးငါးဆယ်ချက်ခန့်ဆောင့်လိုးလိုက်တော့ သူ သိပ်အားရသွားသည်။ “မောင် …အင်း…သိပ် …ကောင်း…တယ်..သိပ်ကောင်းတာပဲ” သက်ရဲ့ သူ့စိတ်ကို နှိုးဆွပေးသည့် အကြင်နာသံလေး “သိပ်ကောင်းတာပဲလား သက်ရယ်…အား…” “အင်း…ကောင်း…ကောင်းလိုက်တာ မောင်…သက်…လိုးရတာ သိပ်ကြိုက်နေတယ်…နာလည်းနာတယ်…ခံစားရတယ်…မောင်..ချစ်တယ်…အား…” “သက်..ဖင်ကုန်းကွာ…” “ဟင်…ဘယ်လို..အင်း…” ပြောပြောဆိုဆို သက် က တဘက်ကိုတစောင်းလှည့်ပြီးလေးဘက်ကုန်လိုက်တော့ ကျစ်လစ်ထွားဝိုင်းသည့် ဖင်အလှက လင်းခနဲ ၊ သူထိန်းမရပဲ သက် ရဲ့ ဖင်လေးကို ပွတ်သတ်ရင်း လီးကို ဖင်ကြားထဲ ထည့်ကာ စအိုဝကို ဖင်နှစ်လုံးသားကို ဖြဲကာ ထည့်လိုက်သည်။ ကျဉ်းမြောင်းသည့် အပျိုဖင် စအိုဝလေးက သူ့လီးကို လက်မခံချင် ၊ လက်မခံလည်း ဖင်ခံရတော့မည့် သက် စအိုလေးကို သူလီးဒစ်ကို အသာထည့်ပြီး အသားကုန်ဆောင့်လိုက်သည်။
သက်ရေ…ဆောရီးကွယ်… “အား…………မောင့်….ဟင့်..အမလေး…နာတယ်…အား..နာ…အာ…အား။….” သူ သုံးလေးချက်ခန့် ဖင်လိုးပေးလိုက်တော့ သက် တော်တော်နာသွားသည်။ “သက် ကိုယ်လိုးချင်တာ သက် ရဲ့ ဖင်လေးပါ ။ သက်ရဲ့အိုးပါကွယ် ။ကိုယ်မျှော်လင့်နေခဲ့ရတာ” “ဘာအရသာရှိလို့လဲမောင်ရယ်သက်တော့နာတယ်..ဟင်း…အင်း…အား..နာတယ်…ဟင့်” “သိဘူးသက်ရယ် ချစ်သူရဲ့ ဖင်အလှကို ဂုဏ်ပြုတာပေါ့ကွယ်…သက်ရဲ့ ဘော်ဒီလေးကို ကိုယ်မက်မောတယ်” “မောင်ရယ် တသက်လုံးလားဟင်…မောင့်ကိုတော့သက်သိပ်ချစ်တယ် လိုးချင်တုန်းခဏပြောတာလား” “မဟုတ်ဘူးသက်ရယ် သက်ကို မောင်တသက်လုံး လိုးမှာပါ…လိုးလို့သိပ်ကောင်းတယ် သက်ရယ်…အား…” “ဟင့်…အား..ချစ်တယ် ကွယ် မောင်ရယ်…ဖင်ကိုဖြည်းဖြည်းပဲ လိုးပါကွယ်…” သက်ရဲ့တောင်းပန်စကားလေးမဆုံးသေး သူက သက်ဖင်လေးကို အသာဆွဲပြီး တချက်ချင်းလိုးနေပြီဖြစ်သည်။ ဖင်လိုးရတာဆိုတော့ လီးတချောင်းလုံတော့မ၀င်ဘူးပေါ့။
စိတ်ကျေနပ်ဖို့တော့ကောင်းသည် ။ တစ်ခါက တုန်ခါပြီး လှပ၀ိုင်းစက်သော မိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့ ဖင်ကို သူလီးနဲ့ ထိုးပြီး လိုးနေရတာ သိပ်ပျော်စရာကောင်းသည်။ တွေးကြည့်တိုင်း လက်ရှိ လိုးနေရတဲ့ အဖြစ်က သာယာနေသည်လေ။ သက် ဖင်လေး ကို သေချာလေး လိုးနေတော့သည်။ တချက်ဆောင့်လိုက်တိုင်း သာယာဖွယ်အသံလေးပြုနေသည့် သက်ရဲ့နှုတ်ခမ်း တုန်ခါသွားသည့် ဖင်သားလေးများ တခါတခါ သူအောက်ကနေနှိုက်ပြီး ဖင်လိုးရင်းနို့ကိုင် လုပ်ရတာလည်း အရသာ ထူးထူးကဲကဲပင်။ စိတ်ကျေနပ်အောင် သက်ရဲ့ ဖင်ကို ဖြဲပြီးတစ်ချက်ချင်း ဆောင့်လိုးပြီးမှပြင် သုက်ကို သက် ရဲ့ စောက်ဖုတ်လေးကို လိုးရင်း သုက်ထွက်ခါနီး နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်း လိုးချက်တွေ နဲ့ သက် စောက်ပတ်ထဲကို လီးရည်တွေ လိုးထည့်ပေးခါနီး နောက်ဆုံး သော အကြင်နာ ကြမ်းကြမ်းများဖြင့် စောက်ပတ်တဆုံး လိုးဆောင့်ရင်း နို့သီးနှစ်လုံးကိုလည်း လက်နှစ်ဖက်ဖြင့် အားရပါးရ ညှစ်ပစ်လိုက်ကာ ၊ သက်နှုတ်ခမ်းတွေကိုလည်း ငုံရင်းစုပ်နေရာ နောက်ဆုံးလိုးချက်များနဲ့ သက်စောက်ပတ်လေး ထဲ လီးရည်(သုက်)တွေ လိုးထည့်ပေးလိုက်တော့တယ်။ ပြီးပါပြီ။